RUGA:ỤMAHỊ KPACHARA ANYA-OESID – hoo!haa!!
RUGA:ỤMAHỊ KPACHARA ANYA-OESID
Abakiliki – Otu jikọtara ndị Ebọnyị Steeti bi mba ofesi, a kpọrọ Organisation of Ebonyi State Indigenes in the Diaspora (OESID) nọrọ ụnyahụ were nye Gọvanọ Steeti ahụ, Devid Ụmahị ịdọ aka na ntị ka ọ kpachara anya ya banyere atụmatụ iweta Ruga (ama Fulani) na steeti ahụ.
Ọnụ na-ekwuru otu ahụ, Mazị Paskal Oluchukwu,n’ozi ya kwuru na gọvanọ ahụ kpebiri ime nke a n’egbughị ụzọ mee ka ndị Steeti ahụ, ndị ikikere o nwere si n’aka mara.
Ha kpọkuru Ụmahị ka ọ kagbuo atụmatụ ahụ ozigbo,ha nọkwara ya ebubo na ọ na-akpagbu ndị ekwenyeghi na nke ya na steeti ahụ.
“Ya anwala ya ọzọ. Anyị, ndị Ebọnyị Steeti ndị udo na-amasị agaghị ekwe ka Gọvanọ Ụmahị ree ọdịnihu anyị iji kwado atụmatụ arụrụ ala Gọọmenti Etiti a maka ihi na ọ chọrọ ịzọ ọkwa onyeisiala n’afọ 2023”
Kaosiladi, Gọọmenti Ebọnyị Steeti gọrọ na ọ bụghị eziokwu ma kwukwaa na o nweghị ebe ọbụla Gọọmenti steeti ahụ mapụtaworo maka Ruga.
Chetakwa na n’ụbọchị Satọdee abalị iri n’abụọ nke ọnwa Ọktoba afọ a, na e nwere ozi na ndị nchị ehi karịrị akarị n’ọnụ ọgụgụ duru ezinụlọ ha wụchie n’otu obodo dị n’Okpuru Ọchịchị Izii na steeti ahụ ka ha birizịa, n’udi na Gọọmenti Ebọnyị Steeti emepeela ogige Ruga ebe ahụ.
N’ozi si n’aka Kọmishọna Steeti ahụ na-ahụ maka Mgbasa ozi, Ọkaikpe Ọjị Uchenna Ọjị, Gọọmenti steeti ahụ kwuru sị, “O nweghị mgbe anyị ji rụọ ogige ọbụla maka ndị nchị ehi. Anyị enweghị ogige Ruga ọbụla n’Ebọnyị Steeti, anyị anaghịkwa akwado inwe ogige Ruga ọbụla n’ọdịnihu.”
Hmm, akụkọ a nwekwara ka ọ dị.
Previous Post: ITIBỌRỊBỌ:GỌVANỌ ZAMFARA ACHỤỌLA NDỊ ODEAKWỤKWỌ NLEKỌTA IRI N’ITOLU
Next Post: NDỊ NTỌ NDỊ FULANI KA NDỊ NWE ALA MARA ỌHỊA NILE NỌ N’ALA-IGBO – FADA A TỌỌRỌ